Ahoana no hahalalana raha miorim-paka amin'ny Android aho: Fampiharana telo ho azy | Vaovao momba ny gadget
Ahoana no hahafantarana raha faka aho
Ny fakana na tsia ny fanaovana azy dia zavatra apetraky ny mpampiasa Android matetika amin'ny fotoana maro. Rehefa vita amin'ny telefaona ity dia azo ny fahazoan-dàlana superuser, izay manome ny fahafaha-manao manova na inona na inona amin'ny fitaovana. Noho izany dia misokatra ho an'ny fanamboarana tanteraka izy io, izay iray amin'ireo lafiny izay manome lanja tsara ny mpampiasa.
Mety nividy telefaona ianao ary tianao ho fantatra raha faka ity faka ity. Izany hoe te hahafantatra ianao raha manana ireo fahazoan-dàlana ireo voahodina ao amin'ilay fitaovana, izay manome anao fahalalahana tanteraka hanova izay tianao ao. Mba hahitana azy dia misy fomba maromaro azo atao.
Raha tsy azonao antoka raha namaka Indraindray na raha nividy telefaona faharoa ianao dia tsara ny manamarina raha miorim-paka ny telefaona na tsia. Soa ihany, misy fomba maro hanaovana azy amin'ny Android, izay hanome antsika an'ity fampahalalana ity ao anatin'ny fotoana fohy. Raharaha mifidy izay tena ahazoana aina aminao.
2 Emulator Terminal
Misy rindrambaiko natao hametrahana amin'ny Android izay natokana indrindra ho an'io. Ny tanjon'ity fampiharana ity izany hoe lazao aminay raha faka na tsia ny telefaona. Ka afaka segondra vitsy dia hahazoantsika miditra ity fampahalalana ity amin'ny fitaovana, raha tsy misy olana lehibe loatra io.
Ny hany zavatra tsy maintsy ataontsika amin'ity tranga ity dia ny misintona ny fampiharana amin'ny telefaona, Azo alaina maimaimpoana ao amin'ny Play Store, ary sokafy avy eo. Ao anaty ny fampiharana dia misy bokotra iray hangatahana anao hanao an'io fandinihana io, izay hilaza aminay raha faka na tsia izahay. Rehefa afaka segondra vitsy dia tanterahina ity fanadihadiana ity, izay hilaza amintsika raha misy na tsia.
Raha misy faka, varavarankely mitsingevana no hiseho eo amin'ny efijery, izay manontany anay raha te hanome alalana superuser an'ity fampiharana ity izahay. Raha manaiky isika dia efa ampandrenesina fa miorim-paka ny telefaona. Ka efa ananantsika ireo alalana ireo. Raha tsy mitranga izany dia tsy miorim-paka amin'izany hevitra izany isika. Tena mora ny manamarina noho ity fampiharana ity.
Ity rindranasa faharoa ity dia mihatra amin'ny rafitra hafa, saingy afaka manampy antsika koa izany raha te hahafantatra raha miorim-paka ny findaintsika na tsia. Amin'ity tranga ity, ny fampiharana dia natokana hamela andao hanao hetsika amin'ny alàlan'ny baiko an-tsoratra, toy ny hoe Linux na Windows, fa avy amin'ny telefaona amin'ity tranga ity. Noho izany dia afaka mampiasa baiko isika izay hamela antsika hahita raha manana fahazoan-dàlana hamaky amin'ny finday isika.
Io no baiko su izay hanampy antsika amin'ity tranga ity. Tsy mila miditra an'io amin'ny fampiharana fotsiny isika, mba hamakafaka raha faka na tsia amin'ny tranga misy antsika. Raha miditra amin'ity baiko ity dia miseho eo amin'ny efijery ny varavarankely mitsinkafona, midika izany fa miorim-paka ity finday ity. Mifanohitra amin'izany no izy, raha tsy misy ny mitranga dia tsy miorim-paka izany. Tena mora ny manamarina, araka ny hitanao.
Ny rindranasa dia azo sintonina maimaimpoana amin'ny Android. Ho fanampin'izay, tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny. Ka afaka mifantoka amin'ny fampiasana azy ara-dalàna isika ary tsy misy ahiahy amin'ity lafiny ity. Fomba tsara iray hafa hijerena raha faka ao amin'ny Android isika na tsia.
Terminal Emulator ho an'ny Android
Ity fampiharana fahatelo ity dia efa ela no nisy tamin'ny Android. Izy io dia rindrambaiko natao hanamarinana ny satan'ireo singa ireo ary hanome antsika fampahalalana momba ilay fitaovana amin'ny fotoana tena izy. Andao ary afaka mahita ny satan'ny finday amin'ny fotoana rehetra (fiasan'ny RAM, CPU, sns.) amin'ny fotoana tena izy. Fa koa, ny fampiharana dia manana fiasa mahaliana antsika betsaka, satria manana ny fahaizana milaza raha miorim-paka ny telefaona na tsia.
Fomba tsara hahazoana scan ny fitaovana feno, ka hahafantatra raha misy zavatra mitranga ao. Mandritra izany fotoana izany dia manome antsika izany fampahalalana mahaliana antsika amin'ity tranga ity, izay hahafantarana raha faka na tsia isika. Izy io dia manao izany miaraka amina endrika izay tena mora ampiasaina, izay mamela antsika hanana izany fidirana izany amin'ny dingana vitsivitsy sy haingana dia haingana.
Castro dia fampiharana izay afaka maka maimaim-poana amin'ny Android isika. Ao anatiny dia tsy misy doka na fividianana karazana, izay mamela ny fampiasana fampiasa amin'ny fomba azo antoka amin'ny fotoana rehetra. Manana kinova faharoa an'ny fampiharana misy izahay, izay kinova karama, izay ahitanay andiana asa fanampiny. Azonao atao ny manandrana ny kinova maimaimpoana ary jereo raha mandoa ny fampiasana ilay kinova aloa. Indrindra raha te hampiasa azy bebe kokoa noho ny fahalalana hoe faka na tsia ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ahoana no hahafantarana raha faka aho
Ny katalaogin'i Philips Hue dia mitombo any Espana ary manavao vokatra maro
Ny fampiasana maody maizina dia mahavonjy batterie 30% amin'ny iPhone